त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको रात ????- निर शाह - koselihk
Posted by koselihk | ९ फाल्गुन २०७२, आईतवार २१:३८ | समाचार |0|
कलाकार निर शाहका दाजु खड्गविक्रम शाह राजा विरेन्द्रका भिनाजु हुन् । उनै खड्गविक्रम पनि २०५८ सालको हत्याकाण्डामा मारिए । तर, निर शाह दरबार र त्यहाँ भएका हत्याकाण्डलाई स्वभाविक मान्दैनन् । उनले दरबारलाई सामान्य विषय जटिल बनाइदिने र षडयन्त्रको मूल थलोको रुपमा बुझेका छन् । उनै शाहसँग पत्रकार नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानीकाे सारसंक्षेप :
केशव भट्टराईको सिनेमाले ५१ औं दिन पार गरेको खुसीयालीमा आयोजित समारोहमा म चलचित्र विकास कम्पनीमा थिएँ। रात छिप्पिँदै थियो, हामी रमाइलो गरिरहेका थियौं। अचानक राति ९: ३० बजे मलाई एउटा फोन आयो–वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट।
फोन गर्नेले सबै कुरा स्पष्ट पार्न नपाउँदै म नराम्ररी झस्किएँ। त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड भएको रात थियो। मेरा दाजु खड्गविक्रम शाह र भाउजु शारदाको पनि दरबारमा हत्या भएको थियो। म त्यहाँबाट तुरुन्त अस्पताल पुगेँ, तर मलाई त्यसको गुह्य कुरा खुट्याउन निकै समय लाग्यो।मलाईसमेत त्यस घटनाबारे जानकारी दिइएको थिएन। सबै घटना लुकाइएको थियो । मेरा दाजु राजा वीरेन्द्रका भिनाजु हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उक्त रात आयोजना गरिएको पार्टीमा उहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । जेठ १९, राति ९ः१५ बजे
मेरा दाजु खड्कविक्रम शाह हाम्रो अभिवाक हुनुहुन्थ्यो । पिताजीको देहान्तपछि उहाँले नै हाम्रो परिवारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो । मेरा हरेक क्रियाकलाप उहाँले नजिकदेखि नियाल्दै आउनुभएको थियो ।नेपालको इतिहासमै भएको ठुलो हत्याकाण्डमा मेरा दाजु र भाउजुको पनि हत्या भएको थियो । राजदरबार हत्याकाण्डले चर्चित त्यो रात मेरा लागि जीवनकै भयावह रात हो । तर, ममाथि त अर्को बिहान पनि व्रजपात हुन बाँकी नै थियो । त्यो घटना सुनेर आमाको पनि देहान्त भयो । जेठ २०, दिउसो ३:३० बजे
मलाई आश्चर्य लाग्छ, दाजु-भाउजुको पोस्टमार्टम नै गरिएन, किन ? हत्या भएको जान्दाजान्दै पनि उहाँहरूको पोस्टमार्टम नगरिनुको खास कारण के थियो ? जबकि दाइ-भाउजुभन्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिहरू मारिएका थिए। दाजु-भाउजुको मृत्युले थोरै पनि महत्व पाउन सकेन । हाम्रा लागि त्यो अकल्पनीय कुरा थियो।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुनु दरबारको ठुलो दुर्भाग्य हो। पछि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्र उदाए, उहाँबाट त्रुटि नै त्रुटि भए। एउटा गल्तीलाई छोप्न धेरै गल्ती उनले दोहोर्‍याए। समयले नै मुल्यांकन गरिसकेको मानिसबारे मैले के मुल्यांकन गर्नु ? तर, किङ वीरेन्द्र वाज अ भेरी गुड हार्टेड म्यान। त्यसमा कुनै शंका छैन। म उहाँलाई असल हृदय भएको मानिसका रूपमा सधैं सम्झिरहन्छु । तर, राजनीतिज्ञको रूपमा भने उहाँ असफल मान्छे हो ।
Previousहङकङमा भएको चाईना स्काई रनर नेशनल सीरिज़ २०१६को प्रतियोगिता नेपाली धावक उपेन्द्र सुनुवार प्रथम भएकाछन।
Nextम नाङ्गो फोटो खिच्न मन पराउँछु । – अर्चना पनेरु
५ पुष २०७३, मंगलवार १७:४०